မြိုင်, 36 နှစ်များ, တာချီလိတ်
ဒီဟာငါသုံးခဲ့တဲ့အကောင်းဆုံးကိုယ်အလေးချိန်ကျတယ်။keto complete မတိုင်မီကအခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုသောက်ခဲ့သည်။ဒါပေမယ့်ဒီတစ်ခုက ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းအလုပ်လုပ်တယ်။ကြွက်သားထုသည်ပုံမှန်ဖြစ်နေသော်လည်းအပိုပေါင်များလျင်မြန်စွာပျောက်ကွယ်သွားသည်။အစာမစားဘဲကိုယ်အလေးချိန်လိုချင်သူတိုင်းကိုကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။
တပ်မှူးန, 22 နှစ်များ, Dau
ငါ KETO Complete ဆေးတောင့်ကိုစတင်ယူခဲ့ပါတယ်၊ ငါကိန်းဂဏန်းအနည်းငယ်ကိုပြုပြင်ချင်တယ်။အစပိုင်းမှာတော့ဆေးရဲ့ထိရောက်မှုကိုငါမသေချာဘူး။ဒါပေမယ့်တစ်လကြာပြီးတဲ့နောက်မှာငါဆာလောင်မွတ်သိပ်မခံစားရဘူး၊ ငါ့အစာအိမ်လည်းမထိခိုက်ခဲ့ဘူး။အနုတ်5ကီလိုဂရမ်နှင့်မထိုက်မတန်။
မောင, 27 နှစ်များ, Kotong
ကျွန်တော့်အစ်မက keto complete ကိုခဏလောက်ယူခဲ့ပြီးဒါကိုကြိုးစားကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ထိုအခါငါမှားမဟုတ်ခဲ့ပေ။ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းခြင်းဖြစ်စဉ်သည်ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်ကာအစာအိမ်ကိုအဆင်မပြေခြင်းနှင့်အစဉ်အမြဲဆာလောင်မွတ်သိပ်မှုခံစားခြင်းမရှိဘဲဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ငါရလဒ်နှင့်အတူကျေနပ်မိပါတယ်2.5လကြာအနုတ် 14 ကီလိုဂရမ်။
ခင်, 23 နှစ်များ, Mitkina
KETO Complete တောင့်သုံးပြီးလူများ၏အောင်မြင်မှုအကြောင်းဗီဒီယိုများစွာကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်အခွင့်အရေးယူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ငါအမိန့်များနှင့်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းရှုပ်ထွေးယူစတင်ခဲ့သည်။တစ်လအနုတ်7ကီလိုဂရမ်အဘို့, ငါ့အဘို့ဤရုံမယုံနိုင်လောက်အောင်အောင်မြင်မှုပါပဲ။ကျွန်ုပ်၏ပုံသည်အရင်ကဲ့သို့ဖြစ်သည်အထိထုတ်ကုန်ကိုဆက်လက်အသုံးပြုမည်။
လိင္, 26 နှစ်များ, တာချီလိတ်
မွေးပြီးချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်အလေးချိန်တက်လာပြီးအစာအိမ်လည်းကျုံ့သွားပြီးနှစ်ဖက်စလုံးတွင်ခွံများပေါ်လာသည်။အဘယ်သူမျှမဆေးဆိုင်အစားအစာများကိုကူညီပေးခဲ့သည်။အမိန့်တောင့ KETO Complete ။ရလဒ်ကတော့အံ့သြစရာပေါ့၊ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး၊ စွမ်းအင်တွေအများကြီးနဲ့ခန်ဓာကိုယ်ကအရင်ပုံစံတွေကိုယူလိုက်တယ်။ငါယူပြီး ၁. ၅ လကြာ၊ ၈ ကီလိုဂရမ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်၊ သူတို့ကကျွန်တော့်အတွက်အပိုဖြစ်နေတယ်။အားလုံးperfectlyုံ။